दाँत पहेंलो छ? प्राकृतिक रूपमै यसरी चम्काउनुहोस्- – Himalaya TV
Home » समाचार » दाँत पहेंलो छ? प्राकृतिक रूपमै यसरी चम्काउनुहोस्-
दाँत पहेंलो छ? प्राकृतिक रूपमै यसरी चम्काउनुहोस्-
२८ चैत्र २०७४, बुधबार १७:३४
दाँत पहेंलो भएकै कारण कतिपय मानिसहरू अरुको सामुन्ने खुलेर हाँस्न र बोल्न चाहँदैनन् । उनीहरू हातले मुख छोपेर हाँसिरहेका हुन्छन् । चिया, कफी, बिंडी, चुरोट, सूर्ती, खैनी अादि चिजहरू सेवन गर्नाले दाँत पहेंलो हुन जान्छ । दाँतको चमक गुमेसँगै मानिसको अात्मविश्वासमा पनि कमी अाउँछ । यदि तपाइँ पनि पहेंलो दाँतको समस्याबाट पीडित हुनुहुन्छ भने दाँतमा चमक ल्यार्इ अात्मविश्वास जगाउन यी घरेलु उपायहरू अपनाउन सक्नुहुन्छ ।
यो दाँत सफा गर्ने सबैभन्दा सजिलो तरिका हो । बेकिंग सोडा प्रयोग गर्दा दाँतको पहेंलोपना हटार्इ पहिलेझैं सेतो र चम्किलो बनाउँछ । यसका लागि टूथपेस्टमा अलिकति बेकिंग सोडा मिलाएर दाँत माझ्नुपर्छ । सोडा र कागती पानीको घोल बनाएर कुल्ला पनि गर्न सकिन्छ । बेकिंग सोडालार्इ पानीमा मिसाएर घोल बनार्इ हप्तामा २ पटक दाँत मोल्दा पनि फाइदा गर्छ ।
तुलसीको पत्ताले दाँतमा हुने कुनै पनि समस्यासँग लड्न मद्दत गर्दछ । खासगरी तुलसीको पातलार्इ सुकाएर पिस्नुहोस् र यसलार्इ मञ्जन अर्थात टूथपेस्टसँग मिलाएर प्रयोग गर्नुहोस् । तुलसी र सर्स्यूंको तेल मिलार्इ पेस्ट बनाएर पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
स्ट्रबेरीमा भिटामिन सी पाइन्छ जसले दाँतलार्इ सेतो बनाउन सहयोग गर्दछ । यसका लागि स्ट्रबेरीको पेस्ट बनार्इ हरेक दिन दाँतको सफाइ गर्नुहोस् । स्ट्रबेरीलार्इ बेकिंग सोडासँग मिलाएर पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । यी दुर्इको मिश्रणलार्इ केहीबेर दाँतमा लगाएर राख्नुहोस् र पछि कुल्ला एवं ब्रश गर्नुहोस् ।
मञ्जनको सट्टा नुनले दाँत माझ्नुहोस् जसले तपाइँको दाँतलार्इ चम्काउन सहयोग गर्दछ । यसलार्इ अंगार वा बेकिंग सोडासँग मिलाएर पनि ब्रश गर्न सक्नुहुन्छ । यसो गर्नाले दाँत बलियो पनि हुन्छ ।
दिनहुँ राती सुत्नुअघि दाँतमा सुन्तलाको बोक्रा रगड्नुहोस् । यसमा भिटामिन सी र क्याल्सियम पाइन्छ जसले दाँतमा लाग्ने किराबाट रक्षा गर्छ । यसका साथै क्याल्सियमले दाँतलार्इ मजबूत पनि बनाउँछ । सुन्तलाको बोक्रा प्रयोग गर्न थाल्नुभएको एक हप्ताभित्र नै यसको सकारात्मक असर देख्न थाल्नुहुनेछ ।
कागतीको रस र नुन मिसाएर दाँतमा लगाउनुहोस् र केहीबेरपछि कुल्ला गर्नुहोस् । यसरी दुर्इ हप्ता लगातार प्रयोग गर्नाले दाँत सफा र चम्किलो हुन्छ ।
यी सबै चिजहरू बाहेक अाफ्नो भोजनमा काँक्रो, स्याउ, गाजर, काँचो ब्रोकाउली जस्ता खानेकुराहरू समावेश गर्न सक्नुहुन्छ । यी खानेकुराहरूमा प्राकृतिक एसिड वा अम्ल पाइन्छ जसले दाँतलार्इ सेतो र चम्किलो बनाउन मद्दत गर्दछ । (संकलक: भानुभक्त बिष्ट )